अभावै अभावका बीच पनि सरकारले महामारी नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम गरेको छ संवाद
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले निम्त्याएको संकटको बेला नागरिकलाई उचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा सरकार निकै चुकेको देखिन्छ । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सबालमा पनि सरकारले उचित व्यवस्थापकीय कार्य गर्न नसकेको र सरकार योजना विहिन रुपमा अगाडि बढेको भन्दै चौतर्फी आलोचना छ । कोरोना महामारीले उच्च रुप लिँदै गर्दा पनि सरकारले उचित परिक्षण र संक्रमितलाई उचित स्वास्थ्य सेवा दिन सकिरहेको छैन् ।
संसार न्यूज अनलाईनले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले गरेका प्रयास र गर्नुपर्ने बाँकी कामबारे पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छ । संसार न्यूजका तर्फबाट नारायण अर्यालले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकाबारे उठेको प्रश्नहरु अधिकारीसमक्ष राखेका छन् । पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री एंव नेकपाका प्रभावशाली नेता अधिकारीसँग अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
के सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको हो ?
अहिले विश्व नै कोरोना महामारीमा गुज्रीरहेको छ । एक हिसाबले कोरोनासँग विश्व नै असफल भएको छ । तुलनात्मक रुपमा नेपालको व्यवस्थापन राम्रो छ । हामी कसैलाई पनि यस्तो महामारी हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन, त्यसका बाबजुद भएका कामहरुलाई हेर्दा सरकार असफल भएको भन्न मिल्दैन ।
महामारीको शुरुवातको अवस्थामा सरकारले के गर्नुपर्दथ्यो र कहाँ नेर चुक्यो ?
सरकार महामारीको शूरुवातको अवस्थामा चुकेको छैन्, शूरुवातको अवस्थामा गर्नुपर्ने लकडाउन गर्यो । बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव थियो । अस्पतालहरुमा पिसिआर टेस्टिङ मेशिन, आवश्यक प्रकारको ल्याब र आवश्यक किटको अभाव थियो । सरकारले लकडाउन कायम गर्दै जाँदा केहि अल्मलिए जस्तो देखिए तापनि पछि आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सफल भएको छ । सरकारले अभावै अभावका बीच पनि उदाहरणीय काम गरेको छ ।
के तपाईंले महामारीको शुरुवातको समयमा पुर्वमन्त्री र राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था बुझेको व्याक्तिको तर्फवाट केहि सुझावहरु राख्नुभयो त ?
मैले तत्कालिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई लिखित रुपमा नै सुझावहरु दिएको थिएँ । पहिलो, स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यक पिपिईको नै अभाव थियो, नेपालमा नै बनेका पिपिई प्रयोग गर्दै आइरहेको अवस्था पनि हो । त्यसैले यहाँ बनेका र बनाउन सकिने पिपिईलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई द्रुत गतिमा परिचालन गर्नुपर्ने र बाहिरबाट पनि आवश्यकता अनुसार खरिद गर्नुपर्ने र उल्लेखित कार्यमा खरिद, संकलन र वितरणको लागि एउटा भिन्नै प्राधिकरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थिएँ । जसले सबै अस्पतालहरुको आवश्यकताको आधारमा सामाग्री पुर्ति गर्ने र त्यसो गर्दा लागत मुल्यमा १० प्रतिशतभन्दा नबढाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा थियो ।
दोस्रो, कोरोना नलागेका र दिर्घ रोगीहरुको उपचारको विशेष प्रवन्ध गर्ने र सबै ठाउँहरुमा कोभिडका अस्पतालहरुको प्रवन्ध गर्ने सम्बन्धमा अति द्रुत गतिमा काम गर्ने सम्बन्धमा थियो ।
तेस्रो, कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि उच्च स्तरिय समितिमा राजनैतिक मान्छेहरुको जमघट मात्रै भएको छ, त्यसैले त्यस समितिमा जनस्वास्थ्य विज्ञ र विभिन्न विषयगत डाक्टरहरुलाई सल्लाहकार वा सदस्यको रुपमा राख्नको लागि सुझाव राखेको थिएं ।
चौथो, महामारीमा काम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको विद्यमान कानुनी अवस्थाले कतिपय आवश्यकता पुर्ति गर्दैन भने आवश्यकता अनुसार अध्यादेश वा ऐनमार्फत कानुन निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नुपर्दछ ।
पाँचौ,महामारी नियन्त्रणको लागि औषधि वा भ्याक्सिन निर्माण हुुने वेलासम्म काम गर्नको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति को लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने, जसले स्वाव संकलन गर्नेदेखि पिसिआर मेशिन सम्म पुर्याउने सम्बन्धमा काम गर्न सक्छन ।
छैटौं, क्वारेन्टाइनमा हेल्प डेस्क राख्दै मास टेस्टिङ को विधिमार्फत जनताहरुलाई आफ्नो घरमा लैजानुपर्दछ भन्ने लगाएतका सुझावहरु राखेको थिएं ।
व्यवहारीक रुपमा हेर्दा त तपाईंको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको त देखिएन नि !
मैले मलाई लागेका विषयहरु सुझावको रुपमा राखेँ, तर सरकारले मैले राखेका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अधिकार राख्छ । तर, मलार्ई लाग्छ मैले जे सोचेको थिएँ त्यो कुरामा म ठिक छु भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । मैले राष्ट्र र जनताको हितमा लागेको र सरकारले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँबाट संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा समेत राखेको थिएँ । समितिले मैले राखेका विचारहरुलाई समितिले समन्वय गरेर पठाएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनशक्ति विन्यास, विनियोजन र कार्यविभाजनको सन्दर्भमा मैले जानेबुझेको सुझाव सल्लाह दिएको थिएँ, केहि सुझाव अनुसार पनि भएको जस्तो लाग्छ ।
वर्तमान समयमा संक्रमणले भयाभह रुप लिंदै समुदाय स्तरमा समेत फैलिसकेको छ । यो अवस्थामा आउँदा सरकारको समय सापेक्ष सिर्जनशिल कदम भएन भन्ने विषयमा पनि गम्भिरतापुर्वक प्रश्नहरु उठेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो ?
हामीले रोकथाम नियन्त्रणका लागि पिसिआर टेस्टिङको मात्रै माग गर्यौं । लकडाउन गर्दा लकडाउनको विरोध गर्यौं खुकुलो बनाउँदा खुकुलो बन्यो भनेर बिरोध गर्यौं । हामीले लकडाउनको पुर्ण रुपमा पालना गरेनौं ।
महामारीमा सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ तर यसको नियन्त्रणमा सबैको उत्तिकै दायित्व रहन्छ, यो विषयलाई हामीले कम महत्व दिएको देखिन्छ । संक्रमणले कुनै बर्ग, क्षेत्र र लिंग जस्ता कुरा गर्दैन, बरु यो भाइरसले दिर्घरोगी र बृद्धबृद्धा अवस्थाका मानिसलाई छिटो असर गर्न सक्छ । त्यसकारणले जेष्ठ नागरिक घरबाट बाहिर ननिस्कने र दिर्घरोगीहरुले सतर्कता पुर्वक रहने गर्न सकियो भने अझैपनि मृत्युदर कम हुनसक्छ ।
अहिले भ्याक्सिको सम्भावना नजिकिदै आएको छ, छिटो आओस त्यो चाहना गरौं । त्यसो भएमा पनि हामीले छिटो खरिद गर्ने, खरिद गरिसकेपछि पहिला कसलाई दिने, खरिद गरिने भ्याक्सिनको उचित तापक्रममा भण्डारण र वितरणको व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा अहिले नै निर्णय गर्न जरुरी छ । यो विषयमा पनि सरकारले अहिले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्दछ, किनकी यसो गरिएन भने पछि भ्याक्सिन आइसकेपछि पनि द्रुत कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ताको व्यवस्था र पिपिई लगाएतको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उच्चतम कोशिष गरिरहेको छ र हिजोको तुलनामा समस्याहरु सामाधान हुँदै गएका छन् ।
मुख्य कुरा सामाजिक दुरी कायम गर्ने र मास्क लगाउने कुरा हो । तर हामीले यो विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा गरेनौ त्यसैले अरु सबै प्राविधिक कामको अलावा सरकारले सचेतनाको पाटोलाई पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । राजनीतिक दलका लाखौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्ने र अहिले शैक्षिक क्षेत्र बन्द भएको सन्दर्भमा शिक्षक विद्यार्थिहरुलाई सचेतनाको निमिक्त परिचालन गर्न आवश्यक देखिएको छ, जसमा प्रभावकारी समन्वयको भुमिका सरकारले खेल्न सक्दछ ।
महामारीमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भुमिकालाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
निजी, सामुदायिक लगाएत सबै क्षेत्रले महामारीको समयमा आफ्नो क्षमता पर्दशन गरेर निवारणमा लाग्ने बेला हो । महामारीले उहाँहरुलाई एउटा अवसर दिएको छ, अघिल्लो मोर्चामा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने । अहिले सरकारको तर्फवाट केहि समन्वयको अभाव होला, तर यतिवेला चित्त दुखाउने र समिक्षा गर्ने बेला होइन । त्यसैले मैले सम्पुर्ण क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमता अनुसार योगदानमा खटिन आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारले पनि सबैलाई सहज हुनेगरि नै समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
के महामारीले आगामी स्वास्थ्यसम्बन्धि नीति र कार्यक्रम निर्माणको सवालमा सरकारको दायित्व र निजी क्षेत्रको लगानीको सन्दर्भमा नयाँ शिक्षा दिएको छ ?
हामीले एकपटक क्युवालाई हेरौं, त्यहाँ पुर्ण सरकारी छ, हामी पनि त्यो दिशातर्फ नजाने हो भने यो क्षेत्रमा रहेको समस्याको अन्तिम निकास निस्कन सम्भव छैन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले नै जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षा पुर्ण सरकारी बनाउनुपर्छ, भने स्वास्थ्य क्षेत्रको त पुर्ण रुपमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसैले स्वास्थ्य विमा जस्ता विषयहरुलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमको शुरुवात भएको छ । हिजो नवउदारवादी अर्थतन्त्रको आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा समेत राज्यको भुमिका कम गर्दै लैजादा आजको यो परिणाम आएको हो ।
हामीले एकपटक क्युवालाई हेरौं, त्यहाँ पुर्ण सरकारी छ, हामी पनि त्यो दिशातर्फ नजाने हो भने यो क्षेत्रमा रहेको समस्याको अन्तिम निकास निस्कन सम्भव छैन् । स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले नै जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षा पुर्ण सरकारी बनाउनुपर्छ, भने स्वास्थ्य क्षेत्रको त पुर्ण रुपमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अन्तिममा, तपाईंले भनेकै विषय कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले देशमा तपाईंहरुकै कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ, यसले भाषण र घोषणा पत्रमा बाहेक समाजवादी स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रमको आधार तयार गर्ने काममा उद्दत भएको देखिएन त ?
स्वास्थ्य विमा, आधाभुत स्वास्थ्य र इमरजेन्सी स्वास्थ्य सम्बन्धि जनस्वास्थ्य ऐनले गरेको व्यवस्था र जेनेरिक नाममा औषधी दिनपर्छ भन्नेजस्ता व्यवस्थाहरु समाजवादी स्वास्थ्यका आधारहरु हुन् । स्थानिय तह स्तरमा अस्पताल बनाउने काम पनि आधारभुत तहका जनताको स्वास्थ्यमा पहुँचको लागि महत्वपुर्ण आधार हो ।
यि महत्वपुर्ण कामहरुको बाबजुद पनि जनशक्ति, पुर्वाधार, प्रविधि र औषधिजस्ता कुराहरुको उचित व्यवस्था गर्न राज्य सक्षम हुनुपर्यो । अन्यथा कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन ।
हरेक जनतासँग स्वास्थ्यकर्मीको सम्बन्ध अनुपात बढाउने, युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको प्रिन्सपलअनुसार कसरी कुन जनशक्तिको विकास र वितरण गर्ने भन्ने विषयलाई मिलाएर मात्रै समाजवादी स्वास्थ्य तर्फको यात्रा गर्न सकिन्छ । क्युवा अहिले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा संसारमा नै उत्कृष्ट रहेको छ । विश्वमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएका राम्रा र बैज्ञानिक मोडेलहरुलाई हेरेर हामीले तुरुन्तै प्रारम्भ गर्नुपर्दछ । सरकार आधारभुत कुरामा त्यसतर्फ अगाडि त बढेको छ तर जनशक्ति उत्पादन र विन्यासको दिशामा द्रुत रुपमा काम गर्न जरुरी छ ।